यी चर्चित अभिनेत्रीले आफनै छोरामाथि यतिसम्म गरेको खुलासा, श्रीमानले खुलाए सबै हर्कत ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यी चर्चित अभिनेत्रीले आफनै छोरामाथि यतिसम्म गरेको खुलासा, श्रीमानले खुलाए सबै हर्कत !
काठमाडौं । टिभी सिरीयल अभिनेत्री श्वेता तिवारी र अभिनव कोहलीबीचको वैबाहिक सम्बन्धमा थप संकट छाएको छ । श्वेता अभिनव बाहेक आफ्ना दुई बच्चाहरूसँग छुट्टै बस्छिन् । अभिनवले अब श्वेतालाई आफ्नो छोरा रेयान्सलाई बे’पत्ता पारेको आरोप लगाएकी छिन् ।
अभिनवले यो पनि भने कि श्वेताले उनको नम्बर ब्लक गरेर उनीसँग कुरा गरिरहेकी छैनन् । अभिनवले शूटिङ गर्दै गर्दा श्वेता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित भएको जानकारी दिएका छन् । अभिनवले श्वेता कोभिड–१९ संक्रमित भएपछि आफुले छोराको हेरचाह गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । अहिले अभिनवले दावी गरे कि श्वेताले उनको छोरालाई भेट्न पनि दिएकी छैनन् ।
उनी अक्टुबर २५ देखि हराइरहेकी छिन् । अभिनवले भने, ‘मेरो छोरा रेयन्श अक्टुबर २५ देखि भेटिएन । मलाई थाहा छैन उ कहाँ छ । उ ४० दिन मसँग बस्यो तर पछिल्लो आइतवारदेखि, श्वेताले मेरो छोरालाई कुनै अज्ञात ठाउँमा लगेकी छ र मलाई भनिरहेकी छैन ।
आइतवारदेखि म श्वेतालाई कल गर्न खोज्दैछु ।’ अभिनवले अझै भने, ‘म श्वेताको घरमा गए तर उनले मलाई भेटेनन् । श्वेताले मलाई ब्लक गरीदिएको छ । मैले मेरो छोरालाई ५ दिनदेखि देखेको छैन । म पनि श्वेताको शोको सेटमा गएँ । मैले प्रमाणको लागि भिडियो पनि बनाए तर श्वेताले मलाई केहि भनिन ।’
जानकारी गराउँ कि श्वेताले गत बर्ष अगस्टमा अभिनवलाई छोडेकी थिइन् । हिन्दुस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै श्वेताले अभिनवसँगको उनको सम्बन्धलाई एउटा असरदार घाउ भनेर वर्णन गरेकी थिइन् । श्वेताले भनेकी थिइन, ‘मैले यो असरदार घाउलाई हटाएँ र अब म स्वस्थ छु ।
नसोच्नुहोस् कि म खुशी दिन खोज्दै छु, म साँच्चिकै खुसी छु ।’ श्वेताले जुलाई सन् २०१३ मा अभिनवसँग विवाह गरेकी थिइन् । यसभन्दा अघि श्वेताले राजा चौधरीसँग विवाह गरेकी थिइन् तर दुबै सन् २००७ मा अलग भएका थिए ।